Stallman izwi kune yemahara software nharaunda. | Linux Vakapindwa muropa
Stallman izwi kune yemahara software nharaunda.
PaLinux Vakapindwa muropa tanga tichifukidza zvese zvine chekuita nekudzoka kwaRichard Stallman kukomiti inotungamira yeFree Software Foundation. Izwi rem protagonist raive risipo.
1 Stallman's izwi
In the chikamu chenhau kubva paSiseko webhusaiti, RMS yakanyora:
Kubva ndichiri kuyaruka, zvakaita sekunge paive neketeni remufirimu raindiparadzanisa nevamwe vanhu dzera rangu. Akanzwisisa mazwi ehurukuro dzavo, asi akatadza kunzwisisa kuti sei vaitaura zvavaitaura. Zvizhinji gare gare Ndakaona kuti ini ndanga ndisinganzwisise masaini asinganzwisisike aipindurwa nevamwe vanhu.
Gare gare, ndakazozviziva vamwe vanhu vakaita zvakashata pamaitiro angu, izvo zvandaisatomboziva nezvazvoku. Nokuva wakananga uye kutendeseka nepfungwa dzangu, dzimwe nguva aiita vamwe kusagadzikana kana kutogumbuka, kunyanya vakadzi. Uku kwaisave kusarudza: aisanzwisisa dambudziko zvakaringana kuti azive kuti ndeapi sarudzo aivapo.
Dzimwe nguva ndairasika tsinga nekuti ndaisave nehunyanzvi hwekumunzvenga.kana. Vamwe vanhu vaigona kuzvitsungirira; vamwe vakanzwa kurwadziwa. Ndinokumbira ruregerero kune mumwe nemumwe wavo. Ndokumbira utungamise kushora kwako kwandiri, kwete kuFree Software Foundation.
Nguva imwe neimwe imwe nguva ndakadzidza chimwe chinhu nezvehukama uye nehunyanzvi hwemagariro, saka Kwemakore aya ini ndawana nzira dzekuvandudza mune aya mamiriro. Kana vanhu vandibatsira kuti ndinzwisise chimwe chinhu pane zvakakanganisika, uye izvo zvichindiratidza nzira yekurapa vanhu zvirinani, ndinozvidzidzisa kuti ndione nguva yekuita nenzira iyoyo. Ndinoramba ndichiita izvi, uye nekufamba kwenguva ndinova nani.
Vamwe vakanditsanangura sematsi, uye zvakanaka. Nekunetseka kwangu kunzwisisa magariro, izvo zvinowanzoitika. Semuenzaniso, ndakadzivirira Muzvinafundo Minsky pane yeMIT tsamba yekutumira mushure mekunge mumwe munhu afunga kuti aive nemhosva saJeffrey Epstein. Zvakandishamisa, vamwe vakafunga kuti meseji yangu yaidzivirira Epstein. Sezvaakange ambotaura, Epstein mubati chibharo, uye vabati chibharo vanofanirwa kurangwa. Ndinoshuva kuti avo vaakabatwa nevaya vaakakuvara vagamuchire kururamisira.
Kupomerwa kwenhema - chaiko kana kufungidzira, kupokana neni kana vamwe - kunyanya kunonditsamwisa. Ndaiziva Minsky chete kubva kure, asi kumuona achipomerwa zvisiri izvo kwakaita kuti ndiuye kunozvidzivirira. Ndingadai ndakazviitira chero munhu. Hutsinye hwemapurisa hunonditsamwisa, asi apo mapurisa paanozonyepa nezvevanoitirwa, kupomedzerwa kwenhema ndiko kutsamwa kukuru kwandiri. CIni ndinosimudzira rusarura uye kuita zvepabonde, kusanganisira yavo systemic mafomu, saka kana vanhu vakati handidi, izvo zvinorwadza zvakare.
Zvaive zvakanaka kwaari kuti ataure nezvekusaruramisira kwaMinsky, asi kwaive kushomeka kwetoni kwaasina kuziva semamiriro ezvinhu kusaruramisira kwakaitwa naEpstein kuvakadzi kana kurwadziwa kwaakakonzera.
Ini ndadzidza chimwe chinhu kubva pane izvi nezvekuita zvakanaka kune vanhu vakakuvadzwa. Mune ramangwana, izvo zvinondibatsira kuve akanaka kune vanhu mune mamwe mamiriro, zvinova ndizvo zvandiri kutarisira kuita.
Ini ndinonzwisisa zviri kutaurwa naStallman, semunhu asinganyatsoona ndakarasikirwa nezvakawanda zvisiri zvemashoko uye ndakave nematambudziko ekutaurirana. Kunyangwe, isiri yakakomba seyake. Mumwe munhu akataura mune imwe chat, kunyange ndisina kuitsigira, kuti anotambura neimwe mhando yekusagadzikana kweiyo autism spectrum. Ichokwadi ndechekuti zviri kuramba zvichijeka kuti hapana chikonzero chetsika chakasimudzira mushandirapamwe une hutsinye wakasimudzirwa nemamwe makambani anowana mari yakawanda kubva kune yakavhurika sosi pane yavanodzoka. Uye rubatsiro rwakakosha rwevanhu vanoona yakavhurwa sosi senge chikuva chezvematongerwo enyika.
Ndingadai ndisina kunyora iyo ndima
Zvinoita sekunge kwandiri kuyedza kuzviisa pasi pehudzvanyiriri hwezvakanaka zvematongerwo enyika izvo zvinoda kuratidza kuchena kwekutenda nekuverenga zvirevo zvemitambo. Pakanga paine zvikonzero zvekuti Stallman ataure nezvaMinsky, asi akange asina chikonzero chekutaura nezvaEpstein
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Stallman izwi kune yemahara software nharaunda.
Richard Stallman ane asperger's.
Iwe ungadai usina kunyora imwe yendima, asi ndinofunga iyo tsamba yese ingadai yakave isina basa. Stallman zvakajeka haana kutsigira chero mhosva uye haigone kana kutaurwa kuti aive nehukasha hushoma nevakabatwa. Asi kunyangwe kusava akanaka kana asina hunhu hazvireve kuve tsotsi uye hazvinei nechinzvimbo chako muFSF.
Izvi zvinoonekwa kune chero munhu akatendeseka anotarisa nyaya yacho. Zvinoitika ndezvekuti uku kutsvaga kwevaroyi uye kwete kuyedzwa uye mukuvhima kwevaroyi hapana chinhu chakakosha. Mhosva yakanangana naStallman inotora mukana wekubvisa iyo ndiyo puritanism nyowani yezvematongerwo enyika, asi handina mubvunzo kuti ichi ndicho chikonzero chiri kushandiswa kusasimudza kushoropodza kwezvikonzero zveimwe mhando (kugutsikana kwevanhu, kuda kuchinja FSF mutemo, nezvimwewo). Zvakafanana apo Philip IV weFrance akapomera maTemplars eSatanism nedzimwe tsika dzenhema kuti vakwanise kutora pasita vasina kushoropodzwa.
Nekudaro, tsamba uye kunyangwe ndima yaunoshoropodza inoita senge yakanaka kwandiri nekuti zvinojekesa kuti kudzingwa kwake hakusi nekuda kwezvaanofunga asi kuti chikonzero chakapfava. Izvo hazvizokubatsire iwe chero zvakanaka, hongu, asi zvinoramba zvakadaro nenzira yekuti kana kesi ikaongororwa mune ramangwana.
Yakakura mhinduro yako.